Ungazinyusa Kanjani Izimangalo Zengozi Yokulimala Kwakho e-Dubai noma e-United Arab Emirates? | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Inani le ukushona kwezimoto e-UAE phakathi nezinyanga eziyisishiyagalombili zokuqala ze-2014 kwakungu-463, a Umbiko weNgqongqoshe Wezangaphakathi iphakamisa. Ukusuka ngokungazelelwe, ukusheshisa, ukwehluleka ukugcina ibanga eliphephile kanye nokunye ukwephula umthetho wethrafikhi kwakuyizimbangela ezivame kakhulu zemiphumela ebulalayo. Nakuba kuncipha ukulimala okuhlobene nomgwaqo, inani laso lisaba phezulu.
Uma ushayela ezweni, kufanele ulungele izinhlobo eziningi zezimo. Ukuba nomhlobo womshuwalense ofanele nokukwazi ukwenza ukulimala komuntu siqu uma kwenzeka kwenzeka ingozi yethrafikhi kokubili kubaluleke kakhulu. Kufanele ulungiselele kusengaphambili lezi zimo ezimbi kunazo zonke. Ukwazi ukuthi ungenza kanjani esimweni esiphuthumayo kuzokwenza kube lula kuwe ukwandisa isimangalo somonakalo emotweni yemoto.
Kuthatha ukuthini ukuthola ukulungiswa okulungile kokulimala? Le nqubo yomshuwalense olandelayo uyakwenza kube lula kuwe ukuba uthole isinxephezelo esifanele.
Uma kwenzeka ukhetha ukuthenga imoto esetshenzisiwe ngenkathi uhlala e-Dubai, qinisekisa ukuthi akukaze kwenzeke engozini kakade. Uma kunjalo, inani lembuyiselo yakho yomshuwalense lingase linciphise kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, kungase kudingeke ukuba uhambe ngenqubo yokwakha yokude nokubiza kakhulu, ngakho qiniseka ukuthi ucabangela zonke izinzuzo nezingozi. Ukuthenga imoto entsha kungase kube yinto ewusizo futhi kungakusiza ngisho nokugcina imali ngokuhamba kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, izimoto ezinjalo zivame ukuba nezinsimbi zokuphepha ezingcono (okuqinisekisa impilo yakho futhi kunganciphisa amaphrimiyamu omshuwalense okumele ukhokhe).
Ukubaluleka kokuba nomshuwalense oqondile
Thatha isikhathi sakho ukukhetha inkampani yomshuwalense efanele kanye nenqubomgomo efanele. Zombili lezi zizobaluleka ekutholeni isinxephezelo esifanelekayo uma kukhona isimangalo sengozi yemoto.
Izinkampani ezihamba phambili zizokunikeza isinxephezelo sezokwelapha nezemali. Bazokusindisa isikhathi sakho nenkinga. Sondeza njalo ngaphambi kokukhetha ukucaphuna komunye umshuwalense noma omunye. Ukuqhathanisa ohlangothini oluhlangothini oluzokwenza kube lula ukukhomba umehluko bese uphawula imigomo nemibandela eningi kakhulu.
Bheka Ispredishithi Esihle ngaphambi kokusayina noma yini
Ungalokothi unganaki ukuphrinta okuhle. Funda yonke imininingwane yesivumelwano ngaphambi kokuwamukela inqubomgomo yomshuwalense owanikezwa yona. Akufanele kube nemali efihlekile noma izimo ezikukhubaza ukuba uthole isinxephezelo sezimali uma kwenzeka ingozi.
Uma ungayiqondi noma yimiphi imigomo nemibandela, cela inkampani yomshuwalense ukuba uthole ukucaciswa. Qiniseka ukuthi uyazi zonke izinto. Thatha isikhathi sakho, cabanga ngakho futhi ungasayine noma yini ongazizwa ungakhululekile.
Yazisa Umshuwalense Wakho Wokuguqulwa
Qiniseka ukuthi uxhumane nomshuwalense wakho ngaphambi kokuthi unqume ukwenza noma yikuphi ukulungiswa emotweni yakho. Ungase ungakhathazeki kancane ngokushiya imoto yakho ngemikhuba yamasonto ambalwa, kodwa lokhu kuyindlela engcono kakhulu.
Eqinisweni, ezinye izinkampani zomshuwalense zenqabe ukukhokha imali esiphezulu etholakalayo uma kwenzeka ushintsho.
Thola Ummeli Wokulimala Ongakalungile
Ukwenza ukulimala komuntu siqu ukulimala kwelinye izwe kungaba nzima ngoba awuqapheli imithethonqubo yasendaweni kanye nemininingwane ethile. Indlela engcono kakhulu yokubhekana nalokhu ubunzima ihilela ukhetho lommeli olimalayo olwazinikele.
Kungumqondo ohlakaniphile ukhetha ummeli ngisho nangaphambi kokuba ukhethe inqubomgomo yomshuwalense. Ummeli wakho angakuqondisa ngenqubo futhi akusize ukhethe ukhetho oluzofaneleka kakhulu ezidingweni zakho.
Ummeli kumele abe ngowokuqala ukushayela uma kwenzeka ingozi. Ummeli wakho angakusiza ukuba unqobe ukushaqeka kokuqala futhi wenze zonke izinyathelo ezizobaluleka ekukhuliseni isimangalo somonakalo.
Hlola izimpendulo zabaqeqeshi abahlukene futhi ubuke ukubuyekezwa kwe-intanethi. Njengalapho ekukhetheni inkampani yomshuwalense, kufanele ube nemibuzo eyanele kusengaphambili. Yonke yomshuwalense wakho wengozi ephendula imibuzo kufanele iphendulwe ngendlela eqeqeshiwe futhi elula ukuyiqonda. Isitayela sokuxhumana sommeli sibalulekile, njengokwenzeka kwabo emkhakheni wezimangalo zomshuwalense wengozi yemoto.
Kunezinto ezibalulekile okudingeka uyenze, uma uzibandakanya engozini yemoto. Okokuqala, qiniseka ukuthi uthatha izithombe eziningi zes scene. Khokha ngokuqondile noma yimuphi umonakalo emotweni yakho bese ufaka eminye yemoto yomshayeli. Ngokuqinisekile izithombe eziningi zizoba ubufakazi obubalulekile bokufaka isicelo somshuwalense.
Nazi ezinye izinto ongase uthande ukuzitholela ikhamera uma kwenzeka:
Ukulimala kokubili izimoto (kwangaphandle nangaphakathi)
Izithombe zempawu zomgwaqo eziseduzane, ikakhulukazi uma zihambisa imingcele yejubane
Elinye ipuleti yelayisensi yemoto nemodeli yemoto
Ama-skid amamaki, nobunye ubufakazi emgwaqweni
Ama-shots close-up wokulimala noma ukulimala komuntu siqu
Izikhundla eziqondile zezimoto ngokushesha ngemuva komthelela
Thola Umbiko Wezokwelapha
Kungakhathaliseki ukulimala komuntu siqu, udinga ukubona umhlinzeki wezempilo oqinisekisiwe. Inkampani yakho yomshuwalense izodinga ubufakazi bokulimala nokulimala okwenziwe ngengozi.
Umbiko wezokwelapha ungomunye wemibhalo ebaluleke kakhulu yokufaka isicelo sokulimala komuntu siqu. Uma ungazi ukuthi wenzeni noma yini ongayicela kudokotela, shayela ummeli wakho wokulimala futhi ucele isiqondiso ngaphambi kokuvakashela isikhungo sezokwelapha.
Umbiko Wezimoto Zomgwaqo
Imibiko yamaphoyisa ibaluleke kakhulu ezimangalisweni zemoto yemoto. Zivame ukubonwa njengobufakazi obungcono kakhulu obonakalayo, buqine kakhulu kunezithombe kanye nama-akhawunti eqondene nengozi.
Qinisekisa ukuthi uthole ithuba lokubuyekeza umbiko ngoba lingase liqukethe ulwazi oluwusizo oluhle.
Amagama namakheli ofakazi abazimisele ukufakaza
Ukwaziswa ngomunye umshayeli ohilelekile ku-crash (inkampani yomshuwalense, ilayisensi, ukubhaliswa kanye nemininingwane yomuntu)
Izingcaphuno ezicacile zokuphulwa komgwaqo ozenzile
Umdwebo kanye nencazelo embi yokuthi kwenzeka kanjani ingozi
Incazelo yengozi idinga ukuthi ibe nenembile ngokuphelele, ngakho qiniseka ukuthi ubuza iphoyisa ukuthi likutshele lokho abakubonile. Lokhu kungakusindisa zonke izinhlungu zemali yomshuwalense kanye nokuhlupheka ongacabanga.
Kukhona cishe njalo kuzoba ngufakazi emhlabeni wesigameko sengozi yemoto, ngakho qiniseka ukuthi uxhumana nabo. Qoqa amagama abo, amakheli nanoma yiluphi olunye ulwazi lomuntu siqu abangase bazimisele ukunikeza. Futhi, qiniseka ukuthi ubabuza ukuthi ngabe bayathanda yini ukwenza isitatimende phambi kwenkampani yakho yomshuwalense. Abanye bofakazi bangase bangabaze ukukhuluma, yingakho ukubeka imigqa yokuxhumana emaminithini ngemuva kwengozi kubaluleke kakhulu.
Uma ufakazela ukuthi ungakhulumi, ungase ufune ukucela isitatimende esibhaliwe. Incazelo yabo ingaba yinto ebaluleke kakhulu ngesikhathi sesimangalo semoto.
Ungavumeli noma yiluphi ulwazi
Ummeli wakho wokulimala uzokutshela konke okudingeka ukwazi mayelana nokwenza isitatimende nokuxhumana nenkampani yakho yomshuwalense ngemuva kwengozi. Esinye seziphakamiso ezibaluleke kakhulu ozothola ukugwema ukubambelela ulwazi.
Izinkampani zomshuwalense zenza uphenyo olunzulu ngaphambi kokunikeza isinxephezelo. Uma uzama ukuxhaphaza izenzakalo namaqiniso, amathuba ukuthi abaqashi bayothola. Ezimweni ezinjalo, amathuba akho okuthola izimo zokulimala zomuntu siqu ezanelisayo izokwehla.
Gcina irekhodi lezimoto zomshuwalense wezimoto
Uma kwenzeka ungene ezingozini eziningana, qinisekisa ukuthi ugcina amaphepha kusukela ezikhathini zangaphambilini.
Ukwandisa isimangalo somphumela wokulimala siqu e-Dubai kuzoxhomeka ekuhlangenwe nakho kommeli wakho kanye nenani lwazi okwazi ukuhlinzeka ngalo. Ukuthola amaphepha adingekayo futhi ukufuna ofakazi ngemuva kokushayisana kwemoto ngokuqinisekile kuyoba yinselele. Noma kunjalo, lezi zinyathelo zizoqinisekisa impilo yakho yesikhathi eside. Zibophezele, shayela ummeli wakho bese uqedela zonke izinto ezibalulekile. Uma uphatha ukwenza kanjalo, uzokwandisa amathuba akho empumelelo yemfuno yomshuwalense ngokuzenzekelayo.
→ Thumela Previous
Imicabango emi-4 ku- "Ungazandisa Kanjani Izimangalo Zengozi Yokulimala Komuntu eDubai noma e-United Arab Emirates?"
09 / 21 / 2015 ku-12: 37 PM
Kungenzeka yini ukuthi unginikeze iseluleko mayelana nokuthatha isimangalo ngokumelene nalo (ngibona ukuthi kungenzeka ukuthi ngikushiye isikhathi eside kakhulu)
I-1.Dubai ye-Healthcare-Incident 2006.
I-2.Al Isibhedlela sase-Zahara- Nginayo umbiko wezokwelapha. Isigameko esifanayo 2006.
Ngangena emanzini amanzi emsebenzini e-Dubai Healthcare City e-Al Razi Building e-2007. Ngaleso sikhathi ngangingumdayisi wezokuthengisa-ngibonisa odokotela bezakhiwo ezakhiwe esakhiweni esisha esakhiwe i-Al Razi. Ngiphinde nginesihlengikazi njengengumsizi oMsizi woNakekeli ekhaya lokuhlengikaza eDublin.
Ngangifumanwe kabi yi-Hospital Al Zahra ku-2006.
Ku-2010 Nganginomshini wokubamba iqhwa ngenxa ye-arthritis enamandla kusukela ekungaboni kahle kwezinwele ezivela e-Al Zahara ngakwesokudla sami.
Ngisahlupheka nanamuhla njengoba benginenkinga yeposi ngokusebenza - i-trendelenburg gait, ngenxa yokuwohloka kwemisipha ekulindeni ukuhlinzwa unyaka wonke.
Ngangingu-43yrs of age lapho nginomshini wami wokuqothula esibhedlela saseMelika.
10 / 24 / 2015 ku-2: 34 PM
Sawubona, u-Adele .. yebo kungenzeka ukuthi ufune .. Udinga ukuba lapha njengoba sidinga umbiko wamaphoyisa ovela eMajuba Amaphoyisa avumela ingozi .. yiyiphi imali efunwa oyifunayo?
06 / 20 / 2017 ku-8: 42 PM
Ngithole ingozi ku -29 ka-May.
Omunye ushaya imoto yami emuva.
Amaphoyisa afika endaweni yesehlakalo kodwa akazange abone imoto yami futhi wanginika ifomu elihlaza.
Wathi ungashiya futhi uye enkampanini yakho yomshuwalense.
Ngashiya indawo ngemuva kokuthatha ifomu elihlaza.
Ngemuva kosuku engaqala ngalo ukuhlupheka kobuhlungu obuphansi emuva nentamo.
Angikwazanga ukusebenzela ama-3weeks.
Ngesikhathi imoto yami isilungisiwe futhi iya esibhedlela kumele ngikhokhele ukuhamba.
Ngingathanda ukwazi kule nkinga ngingakwazi yini ukucela isinxephezelo sezokwelapha, izinto zezezimali?
UTeresa Rose Co
08 / 28 / 2019 ku-2: 09 PM
Ithimba Lezomthetho Elithandekayo,
Igama lami nginguRose. Ngibandakanyeke engozini yemoto mhlaka 29 kuJulayi 2019 emigwaqweni yaseRas Al Khor Road North. Bengihamba ngemoto ecishe ibe ngu-80-90km / h. Ibala laliqhele ngamamitha ambalwa ukusuka ebhulohweni elikunihlanganisa ne-International City. Ngenkathi ngishayela mina noMama, owayesesihlalweni sabagibeli, ngabona enye imoto emhlophe yehla erempisi ngokushesha futhi ihamba. Ngaphambi kokuthi sazi ube esegumbuqela ikhanda lethu lemoto lisuka ohlangothini lwabagibeli. Le moto ibisuka emzileni ongakwesokudla ophele kulayini wethu (kwesokunxele okuningi nangomgwaqo wesi-4) ngejubane eliphakeme futhi ishaye imoto yethu ebiqonde enyakatho. Ngenxa yomthelela ama-airbags asatshalaliswa. Ngashaqeka futhi angizange ngihambise isikhashana ngenkathi umama wangikhalela ethi ngigijime ngaphandle kwemoto ngaphambi kokuba kubanjwe umlilo ngoba imoto yethu ibishunqa intuthu. Ngiphume ngisesemotweni ngisashaqekile futhi ngizibona ngichitheka igazi. Lapho ngiphaphama ngavele ngabiza amaphoyisa ngacela i-ambulensi. Amaphoyisa afike esizeni ephelezelwa iloli. Amaphoyisa aphelekezela mina nomama siye ngaphesheya komgwaqo silinde i-ambulensi. Ngemuva kwemibuzo nemibhalo eminingi sayiswa esibhedlela iRashid lapho salinda khona ihora noma amabili ngaphambi kokuthola usizo lwezempilo.
Ngangikhathazekile ngenkathi ngisesibhedlela ngoba amaphoyisa omgwaqo awami ukungishayela ucingo ebuza ukuthi ngizoyihambisa kuphi imoto yami, izothatha eyami imoto, ishayise imoto yethu njalonjalo. Inombolo yenkampani yomshwalense ivele ikhale noma umculo wangemuva uqhubeke usebenza ngenkathi kungekho ophendula omunye umugqa. Ngangididekile kakhulu futhi ngingaqondi ngokuphelele ukuthi kufanele ngenzeni noma ngifonele usizo.
Ngosuku olulandelayo saya esiteshini samaphoyisa eRashidiya njengoba omazisi bami bathathwa lapho nokuyilapho kwavela khona ukuthi indoda eshaye imoto yami ibaleke.
Lokho kwamangaza kakhulu.
Ukunciphisa le ndaba, ngithole amanxeba amaningi ehlombe, esifubeni, ezingalweni nasezandleni eziphukile. Umama wami ungeniswe esibhedlela ezinsukwini ezimbili kulandela lesi sigameko ngenxa yomfutho wegazi ophakeme kanye nobuhlungu besifuba. Mhlamunye kungaba semva kwalokho. Ngiphinde ngathola nefoni ephukile selokhu yawa kanzima isuka kudashboard ngesikhathi sengozi.
Kusasa 29 Agasti kuyinto yethu yokuqala ukuzwa. Ngiyazibuza ukuthi inkantolo izosinquma kanjani isinxephezelo esinikezwe ukuthi ngisezinhlungwini ezinzima kodwa yehluleka ukuthola usizo olufanele lwezokwelapha ngenxa yokushoda kwemali? Umshuwalense wenqabile ukukhokha imali ngoba kwakungeyona iphutha lami.
Ake ungazise ukuthi kufanele ngiqhubeke kanjani ngaleli cala?
Umama usendleleni ezohamba ngomhlaka 7 Septemba njengoba esevakashile ngenkathi ngihamba naye lapho eya ekhaya.
Ngiyethemba ukuzwa kuwe. Ngiyabonga